Nankaiza sahady ny vahoakanareo ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nikatona ny pejin’ny fampielezan-kevitra sy ny fandatsaham-bato. Be ny lesoka. Tsy lavina izany. Moa ve anefa tsy efa mahazatra izany fifidianana feno lesoka izany ? Efa an-taonany maro izao isika no miaina fifidianana tsy zarizary. Ekena fa tsy mahasoa ny mitoetra ao anatin’ny zavatra ratsy fa eo ampiandrasana ilay fifidianana manara-penitra araka ny fomba fiteny ankehitriny dia aleo iainana milamina ny zava-misy.
Io no vita. Ny tsara ambara voalohany dia hoe : aleo mba hiova fo amin’izay. Io no vokatra vonjimaika navoakan’ny CENIT. Samy miaiky ny rehetra fa be no tsy tomombana kanefa dia samy niroso tamin’ny fifanandrianana. Mba aoka hilamina sy halamina amin’izay ny tany.
Fanamarihana. Ny manaraka dia fanamarihana no tian-katao. Na dia mbola tsy nivoaka aza ny vokatra ofisialy dia tsapa fa very olona ireo kandida nirotsaka tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena. Na avadika koa ny fomba filaza aza dia : “Very ireo olona nanohana kandida tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena”. Nankaiza izao ny kandida Pierrot Rajaonarivelo ? Na ny antokony (MDM) ? Tsiahivina fa nisy 41 ireo kandida nankatoavina ny firotsahany fa mbola maro noho izany ireo nametraka antonta-taratasy fa nolavina.
Nisy tamin’ireo kandida ho filoham-pirenena ireo no tsy niverina nirotsaka intsony mihitsy tamin’izao fifidianana ho ben’ny tanàna izao. Isan’ireny tsy nirotsaka ireny i Saraha Georget Rabeharisoa, Monja Roindefo, sy ny sisa maro hafa. Tsy nilatsaka izy ireny ka sarotra ny handrefesana hatraiza no mbola fitiavan’ny vahoaka nifidy azy ireo fahizany (vao ny taona 2013 izany).
Tao kosa ireo nanolotra kandida ny antokony. Isan’ireny nanolotra kandida ireny ny antoko MMM (Malagasy Miara-Miainga) tarihin’i Hajo Andrianainarivelo, teo koa ny MTS tarihin’i Roland Ratsiraka. Santionany ireo. Izy ireo dia misy maridrefy handrefesany ny fitiavan’ny vahoaka azy ireo. Ohatra raha tao Toamasina I dia nisy olona 13 828 no nifidy an’i Roland Ratsiraka. Nankaiza avokoa izy ireo toa tsy nivadika tany amin’ny antoko MTS ny fitiavany nandritra izao fifidianana ho ben’ny tanàna izao. Raha ny vokatra vonjimaika navoakan’ny CENIT tokoa dia ???? no azon’ny kandida MTS tao Toamasina. Ekena fa samy hafa ny fitiavana ny filohan’ny MTS sy ny kandida MTS.
Raha ny an’ny kandida Camille Vital indray dia tsy misy elanelana fa izy tenany no nirotsaka tamin’ny fifidianana filoham-pirenena. Laharana fahatelo no nisy azy taorian’ny famoahana ny vokatra vonjimaika tany Toliara, vokatry ny fifidianana ho ben’ny tanàna izany. Very ireo efa nanohana azy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena 9024 ny vato azo ary 40,17%-n’ny tonga nifidy izany. Efa tamin’ny fifidianana depiote no tsy nahomby ny lisitra Hiaraka Isika satria tsy nahazo depiote tao Toliara. Tsy nanaiky izany fitsipahan’ny vahoaka izany ny filohan’ny Hiaraka Isika fa nirotsaka ihany ka 3121 sisa no vato azon’ny lisitra Hiaraka Isika (Camille Vital n o nitarika izany) ary 18,89% izany. Zava-dehibe ny firotsahana amin’ny fifidianana fa io no fomba ahitana ny fitiavan’ny vahoaka ny hevitry ny antoko politika iray, na ny fitiavany ny mpanao politika iray manokana.
Mbola azo tanisaina ny Arema. Nanao hetsika mafy tamin’ny famohazana ny Akany ary nahazo toerana tamin’ny gazety fa tsy ampy izany. Ny mpanaraka ny valan-dresak’i Ratsiraka Didier anefa dia maro ary mahazo akony mirefodrefotra an-gazety fa tsy mivadika safidy izany any anaty vata.
Santionany ihany ireo. Misy ho saintsainin’ny mpanao politika sy ireo te hitarika fifidianana. Ny malaza tsy midika ho tian’ny olona. Ny mahavory olona tsy midika ho mamim-bahoaka. Mila mahatsiaro ny mpanao politika fa ilaina kolokoloina ny fitiavan’ny vahoaka fa tsy rehefa fifidianana ihany vao mahatsiaro azy. Izy tsy manadino. Efa hainy ilay hoe : “raiso fa vola adala tompo”. Irariana hanova famindra ianareo mpanao politika sy mpiantsehatra ara-politika. Beazo amin’ny hevitra ny olona fa aza tambazana vola sy fitaovana lava. Aza atao fitia mosoara taratasy re ny vahoaka e.